एसियनको बोनस सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका, कहिले हुँदैछ साधारण सभा ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » एसियनको बोनस सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका, कहिले हुँदैछ साधारण सभा ?
काठमाडौं - एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको ४% बोनस सेयर सुरक्षित गर्ने बिहीबार अन्तिम दिन रहेको छ । इन्सुरेन्सले जेठ १९ गते हुने साधारण सभाका लागि बुक क्लोज गर्ने भएको छ । त्यसैले बुकक्लोज हुने अघिलो दिनसम्ममा सेयरधनी बनिसकेको हुनुपर्नेछ ।
साधारण सभामा एसियनले ४% बोनस सेयर र कर तिर्न २५ लाख ४३ हजार ९७८.६५ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पेश गर्दैछ । बोनस सेयरपछि कायम हुने १ अर्ब २५ करोड ६७ लाख २५ हजार ४५४.४० रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको ६०% हकप्रद जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि पेश हुनेछ ।